Dhaqanka Naafada Farshaxanka Dhalinyarada Minnesota
Luqada Dakota, fikradaha waxaa lagu sharaxay sida uu qofku ula xiriirayo. Ereyada Mitakuye Oyasin, ama "dhamaan xiriiradeyda," waxay hoosta ka xarriiqaysaa isku xirnaanshaha dareenka caalamiga ah ee Dakota. Midnimada, dhammaan noocyada nolosha iyo dabeecadda dabiiciga ah, waxay keenaysaa dhaqanka Dakota. Sannad kasta, si kastaba ha ahaatee, bulshada ayaa lumisay odeyaal kuwaas oo la qaata iyaga aqoon, khibrad, iyo xikmad aad u qaali u ah jiilalka da'da yar. Maanta kaliya shan odhaah oo ku hadla afafka hore ayaa ku nool Minnesota.
Goorma Dakota Wicohan ayaa ku taliyay in ay abuuraan barnaamijkooda farshaxanka sanadka 2012-ka, oo ay taageeraan qeyb ka mid ah machadka McKnight Foundation, waxay ku adkeeyeen xooga la saaro waayo-aragnimo ahaan habka la xidhiidha, iyo marxaladda dhaqanka. Magaca ay doorteen - tawokaga - waxay muujinaysaa midka wax qurxiya. Tawokaga waxay doonaysaa inay isticmaasho farshaxanka si ay ula xiriirto bulshada iyada oo qiimaha Dakota, caadooyinka, iyo hababka nolosha.
"Hooyaday waxaa la afuufay sida aan u taqaanno. Waxay tiri, 'Waxaan dareemayaa sida aan kaaga tagi karo, waad fiicnaan doontaa, waxaad baran doontaa gabdhahaaga. Waanu fiicnaan doonnaa. '" -BETH O'KEEFE
Tawokaga waxay asal ahaan ka koobantahay wareegga taageerada farshaxanka sanadka. Maxay Dakota Wicohan ogaatay, inkasta, farshaxan-yahannadu ma aysan rabin wax badan oo ay soo uruuriyaan oo ay hadlaan. Waxay rabeen in ay soo uruuriyaan ayna sameeyaan farshaxan. Sanadkii 2014, hay'addu waxay martigalisay saddex tababareed oo farshaxan ah waxayna kafaala qaadday saddex mashruuc oo farshaxan oo dhalinyaro ah. In ka badan 30 qof oo da 'walba ah ayaa isugu yimid si ay u bartaan, u baraan, u wadaagaan, uguna abuuraan dhowr mashruuc oo taageera Dakota Wicohan. Xirfadlayaashu waxay ku hawlanayeen saddex farshaxan oo waawayn iyo 22 arday oo wax-barasho leh iyada oo loo marayo saddex kooxood - koox kasta oo ka shaqeynaysa qaab farshaxan oo kala duwan sida boodhadhka, jarista, iyo baqashada.
Saddex koox oo farshaxan oo dheeri ah ayaa ka dib la sameeyay, iyagoo ka shaqeynaya darsin yar oo dhalinyaro ah iyada oo loo marayo sheeko, sawir muuqaal ah, iyo Busy Busy Beads, oo ah hawlgelinta lacag ururinta dhalinyarada.
Macalimiinta Tawokaga iyo ardayda waxay isku duubeen qiimaha isku xirka dhaqanka Dakota iyo caadooyinka qarniyadii hore. Tababaraha Beth O'Keefe ayaa yiri, "Hooyaday waxaa la afuufay sida aan u taqaanno. Waxay tiri, 'Waxaan dareemayaa sida aan kaaga tagi karo, waad fiicnaan doontaa, waxaad baran doontaa gabdhahaaga. Waxaan dooneynaa inaan fiicneyn. '"Beth ayaa sii socotay si ay u muujiso" Inaan arko dhalinyaradu tani waxay i siisaa rajo. Waa dhiirigelin. "
Dakota Wicohan oo ah adeegyadeeda dhaqanka, Dakota Wicohan waxay ka caawisay in ka badan 200 oo xubnood oo bulshada ku xiran luqadda Dakota iyada oo loo marayo barnaamijyadooda luqadaha kala duwan iyo barnaamijyada lifaaqyada ilaa 2012.